Isticmaal kaarkaaga eWIC
Ku soo dhowow eWIC, habka ugu fudud ee sahlan ee dukaanka!
Halkan waxaa ku qoran tilmaamo aad ku iibsanaysid kaarkaaga cusub ee eWIC:
Iyadoo la adeegsanayo eWIC, waxtarkaaga WIC ee qoyskaaga waxaa lagu dhejin doonaa hal akoon WIC / kaarka eWIC xafiiskaaga WIC. Liiska cuntooyinkaaga ayaa lagu siin doonaa adiga oo leh bilowga iyo dhamaadka taariikhda muddada dheefahaaga. Waxaad u isticmaali doontaa kaarkaaga NH eWIC inaad kaga iibsato cuntadaada WIC dukaanada loo oggol yahay NH WIC.
Raadi NH WIC la aqbalay halkan saxiix.
Dooro cuntooyinkaaga WIC adigoo isticmaalaya dheelitirka faa'idada gurigaaga iyo Liiska Raashinka ee WIC ee WIC.
Cuntada WIC waxaa laga yaabaa in la gato haddii loo baahdo inta lagu jiro bisha gargaarka, kaliya iibso alaabta WIC ee aad u baahan tahay.
Waxaad u baahan doontaa inaad kala soocato alaabtaada WIC markaad wax iibsaneyso dukaanka yaryar.
Khasnajiga ayaa baaraya cunnooyinka WIC. (ma Can Isticmaal lane isku-shaandhaynta.)
Kala soo qaado kaarka eWIC-ka. Had iyo jeer isticmaal kaarkaaga eWIC ka hor inta aanad bixin noocyada kale ee lacag bixinta.
Qor afarta lambar ee lambar ah.
Akhristaha kaadhka ayaa ku weydiin doona inaad xaqiijiso cuntooyinka WIC ka hor inta aan laga jarin iibka WIC ee dheelitirka kaarka. Ogolow cuntooyinka lagu iibsado kaarkaaga eWIC.
Miisaaniyada haray waxaa lagu bixin karaa lacagta caddaanka ah, EBT ama nooc kale oo ah lacag bixinta dukaanka.
Qaado kaarkaaga iyo rasiidka. Rasiidhadaadu waxay muujinaysaa waxaad soo iibsatay iyo waxa ka hadhay kaarkaaga eWIC.
Cuntooyinka WIC waxaa loo isticmaali karaa inta u dhexeysa bilowga bilowga iyo dhammaadka bishan. Dhamaan faa'iidooyinka aan la isticmaalin waxay dhacayaan bartamaha badhtamaha dhammaadka maalinta dhammaadka bisha.
Liiska Raashinka ee WIC ee WIC
Liiska Cuntada Ingriiska
Liistada Cuntada Isbaanish
Ku saabsan lambarkayga PIN
Waa maxay PIN (Lambarka Aqoonsiga Shakhsiga)?
PIN waa afar lambar oo qarsoodi ah oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho kaarkaaga eWIC. Marka aad dooratid PIN, dooro afar lambar oo fudud oo aad xasuusato, laakiin aad u adag tahay qof kale inuu ogaado.
Sidee baan u ilaalin karaa lambarkayga PIN?
Ha ku qorin PIN kaarkaaga.
Ha siin PIN-kaaga qof kasta oo aadan rabin inaad isticmaasho kaarkaaga. Haddii qof uu yaqaan PIN-kaaga oo isticmaalaya kaarkaaga si uu u helo gargaarka cuntada adigoon fasax lagaa haysan, faa'iidooyinkaas lama beddeli doono.
Ka waran haddii aan iloobo PIN ama rabto inaan bedelo PIN?
Wac lambarka Adeegga Macaamiisha ee ku yaal dhabarka kaadhkaaga si aad u dooratid PIN cusub. Waxaad u baahan doontaa lambarka sirta ah iyo taariikhda dhalashada qofka kaarka leh.
Maxaa dhacaya haddii aan galo PIN-da khaldan?
Waxaad haysataa afar fursadood inaad ku qorto lambarkaaga saxda ah ee saxda ah. Haddii PIN-ka saxda ah aan la gelin isku daygii afraad, kaarkaaga eWIC ayaa la xirayaa oo dib u bilaabi doona saqda dhexe. Ka dib saddex isku day tijaabin guuldarro, wac Adeegga Macaamiisha si aad u dejisid PIN-kaaga oo aad iska ilaaliso kaadhkaaga inuu xiro.
Ma u baahan tahay caawinaad dheeraad ah?
Haddii kaarkaaga eWIC uu lumo, la xado, ama waxyeelo soo gaadhay waxaad la xiriiri kartaa xafiiska WIC ee xaafaddaada adiga oo taabta "Soo hel xafiiska WIC"Badhanka, wac adeegga macaamiisha 1-855-279-0680, ama wac WIC Xafiiska Gobolka 1-800-942-4321.
Waxaa abuuray JPMA, Inc. | Xuquuqda daabacaadda 2012 - 2021 | Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.